Dib u dhac ku imaaday Socdaal uu Madaxweynaha ku tagi lahaa Kismaayo. – idalenews.com
Dib u dhac ku imaaday Socdaal uu Madaxweynaha ku tagi lahaa Kismaayo.
War gowr dhow naga soo gaaray Villa Somalia, ayaa sheegaya in Socdaalka Madaxweyne Xassan Sheikh Ee Kismaayo uu kuimaaday dib u dhac.
Si kastaba ha ahaatee, Madaxweyne Xassan ayaa dhowr jeer ka baaqday Socdaaluu ku gaari lahaa Magaalladda Kismaayo, waxa uuna dib u dhacaani qeyb ka noqonaaya Dib u dhacyadii hore eek u imaaday Madaxweynaha iyo Wafdigiisa.
Madaxweyne Xassan iyo Wafdi uu hogaaminaayo oo ku wajahan Magaalladda Kismaayo.
DOOD WADAAG: Prof Cali Maxamed Geedi oo dowlada ku eedeeyey in lacagaha soo gala aysan siinin Ciidamada Dowlada DAAWO VIDEO